चितवनमा जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको लागि गोलाप्रथा हुने - Sankalpa Khabar
1. अर्थसचिव आजबाट विदामा,मन्त्री रहेसम्म नआउने
2. चीनको सियान सहरमा फेरि लकडाउन
3. अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म उनको कुरा सुन्दैनौं : भट्टराई
4. पीएसजीको मुख्य प्रशिक्षकमा गाल्टिएर नियुक्त
5. अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि प्रचण्ड र देउवाबिच भेटवार्ता
6. नेपाल प्रहरीका ६ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ ?
चितवनमा जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको लागि गोलाप्रथा हुने
९ जेष्ठ १७:३२
चितवन।चितवनमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को प्रमुख र उपप्रमुखको लागि गोला प्रथा हुने भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन र नेकपा (एमाले)सँग बराबर मतदाता हुने भएपछि जिससको लागि गोलाप्रथा हुने भएको हो ।
जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउँछन् । चितवनमा जिससको निर्वाचनमा सात पालिकाका १४ जना मतदाताले मतदान गर्ने छन् । जिससको निर्वाचन जित्न कम्तिमा आठ मत ल्याउनुपर्छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनले तीन पालिका प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितिसकेको छ । भरतपुर महानगरको प्रमुख र उपप्रमुख पनि जित्ने पक्का भइसकेको छ । अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ । मत गन्न बाँकी रहेका भरतपुरका तीनवटै वडाको सबै मत एमाले–राप्रपाले पाए पनि जित्ने सम्भावना टरेको छ ।
यससँगै जिससको निर्वाचनका लागि गठबन्धनसँग सात भोटमात्रै हुने भएको छ । एमालेको एक्लै सात भोट छ । एमालेले तीन पालिका प्रमुख र चार उपप्रमुख जितेको छ ।
जिसस जित्न गठबन्धन र एमाले दुवैसँग पर्याप्त भोट नपुग्ने निश्चित छ । अब गठबन्धन वा एमाले कुनै एउटा पक्षले अर्को पक्षको एउटा भोट आफूतिर तान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यदि त्यसो नभए जिससको प्रमुख र उपप्रमुखको लागि गोला प्रथा हुने छ ।
पालिकामा कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सकिएपछि मात्रै जिससको निर्वाचन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीले जानकारी दिए । जिससको निर्वाचनमा बराबर मत आए गोलाप्रथाबाट जिसस प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुने उनले बताए ।
‘जिससको निर्वाचनमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन् । पालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रनिधिले जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको लागि उमेदवारी दिन पाउँछन्’, उनले भने, ‘मत बराबर आए गोला प्रथाबाट जनप्रतिनिधि छान्ने काम हुन्छ ।’
पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका उमेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका सदस्यको लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्कीले जानकारी दिए ।
नगरपालिकामा तीन जना र गाउँपालिकामा दुई जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित हुने उनले बताए । त्यसको लागि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यले मत हाल्न पाउँछन् । कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतले गराउने कार्कीले बताए ।
‘कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा दलित र अल्पसंख्यकलाई दलहरुले उमेदवार बनाउन पाउँछन् । निर्वाचन अधिकृतले त्यसको निर्वाचन गराउने व्यवस्था छ’, उनले भने ।
जसपाले सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, अध्यक्ष यादव नयाँ मन्त्रीको…
१७ असार ११:३७
बेलायतमा कार्यरत पत्रकार नेपालको लागि प्रेरणाको स्राेत हुन् :…
२२ असार १२:५६
हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न क्यानडालाई चीनकाे आग्रह
२० असार १३:४०
पाँचलाख अफगान नागरिक घरबारविहीन हुने जोखिममा
१७ असार १३:४५
१८ असार १३:०९
रामेछाप बस दुर्घटना अपडेड : मृतकको संख्या १२ पुग्यो
२१ असार १४:१०
उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव : कांग्रेस पक्षमा, माओवादी…
२१ असार ११:०७
संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि आयोगले माग्यो १० अर्ब
२२ असार १७:२८
अर्थमन्त्रीमाथि उठेका विषयबारे माओवादी केन्द्रले एमालेसँग छलफल गर्ने
२२ असार ११:३४
नेपालमा थप ५५ जनामा कोरोना पुष्टि
१६ असार १७:१२
दार्चुलामा तूइनबाट खसेका व्यक्तीको खोजिकार्य तीव्र बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
२२ असार २३:१५
भारतमा दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा
२२ असार २३:१२
निषेधाज्ञाबिच अछाममा दिनभर प्रदर्शन
२२ असार २३:०६
मानव बेचबिखन आरोपमा तिनजना पक्राउ
मुख्य समाचार : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा, शर्मामाथि छानविन…
२२ असार २२:०५
अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि प्रचण्ड र देउवाबिच भेटवार्ता
२२ असार २१:४८